प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छैन - NepalDut NepalDut
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छैन
फागुन ४ गते २०७५
उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको दोहोर्‍याएका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने पोखरेलले बताएका छन् । नेकपाका प्रभावशाली नेता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले नेपाली रेडियो नेटवर्क र जनता जान्न चाहन्छन् टेलिभिजन कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग शनिबार कुरा गर्दै ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा सत्यता नरहेको दाबी गरे ।
‘मैले दुबै अध्यक्षसँगको भेटमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा के हो भनेर सोधेको छु । तर, दुबैले यो विषय केही होइन भन्नुभएको छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘ओलीज्यूलाई किन हटाउने ? केका लागि हटाउने ? उहाँले नै पाँच वर्ष चलाउनु हुन्छ ।’
प्रचण्ड भावी प्रधानमन्त्री हो भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘समय आएपछि भनौँला । अहिले नै त्यो विषयमा बोल्नु हतार हुन्छ । १२ बजे दिने उत्तरलाई १२ बजे नै दिनुपर्छ । समय अगाडि उत्तर दिनु हुँदैन । हतार हुन्छ ।’
ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा कुनै पनि सहमति नभएको उनले दोहो¥याए । ‘हावाको भरमा कुरा गर्नु हुँदैन । दुई तिहाइ बहुमतमा बनेको सरकार छ । दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा काम गर्नुभएको छ’, पोखरेलले भने, ‘सरकारले गतिका साथ काम गरेको छ । परिणाम आउन शुरु भैसकेका छन् ।’
वर्तनमा सरकारले काम गर्न सकेन भनेर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आलोचना गर्दै आउनु भएको छ नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘मैले जहिले पनि टेलिभिजन हेर्छु वा रेडियो सुन्छु त्यस बेला उहाँहरूले सरकारको प्रतिरक्षा गरेको देख्छु । सरकारको कामको प्रशंसा गरेको देख्छु ।’